के यूरोपा लिग फाइनल हाजार्डको चेल्सीबाट अन्तिम खेल हो ? - Experience Best News from Nepal
बाकुमा आज दुई प्रिमिएर लिग प्रतिद्वन्दी भिड्दै छन् भने अफबाहको उचाईमा रहेको हाजार्ड रियलको छिनोफानो समेत अन्त हुने भएको छ । अर्को सिजन च्याम्पियन लिगका निम्ति चेल्सीले आफ्नो स्थान बनाइसकेको छ । ठुलो श्रेय समेत चेल्सी स्टार एडेन हाजार्डलाई जान्छ नै ! आज प्रिमिएर लिग प्रतिद्वन्दी आर्सनल र चेल्सी लण्डनबाट निकै टाढाको स्टेडियममा भिड्दै छन् । विभिन्न अफबाह र सत्यताले हाजार्डको आजको खेल अन्तिम समेत हुन सक्ने देखिन्छ ।
चेल्सीमा २०१२ देखि नै हाजार्ड आवर्द छन् भने जुन २ मा रियलले हाजार्डलाई आफ्नो क्लबमा अनुबन्ध गर्ने समाचार समेत बाहिरिसकेको छ । झन्डै ७ साल चेल्सीमा बिताएका हाजार्डका निम्ति यो खेल भने चेल्सीबाट अन्तिम खेल हुन सक्ने पक्का भएको छ ।
लण्डनबाट झन्डै २५०० माइल टाढा आज यूरोपा लिग हुदै छ भने हाजार्ड चेल्सीका निम्ति अग्र पंक्तिमा हेरिने छ ।
१३० मिलियन यूरोका निम्ति सम्झौता गरिरहेको चेल्सीले अन्तत रियलसंग ११५ मा नै सम्झौता गर्न लागेको देखिन्छ र सहमति समेत भएको बुज्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दी समेत चेल्सीमा देखिने सम्भबना बढेको कारण पनि चेल्सीबाट हाजार्ड बिदा हुन लागेको बुजिन्छ । फिफाको ट्रान्सफर प्रतिबन्धले चेल्सीलाई निकै ठुलो ढक्का दिदा हाजार्डले चेल्सीको सम्झौता सकिनु अगाबै छोड्न लागेका हुन ।
आजको नेपाली समय १२:४५ मा हुदै गरेको यूरोपा लिगका निम्ति चेल्सी र आर्सनल दुवैलाई बधाई !!!
फाब्रेगास: रियल मड्रिडबाट हाजार्डले एक दिन बालोन डी’ओर जित्छन !!
एफए कपमा आज हुदै छ महा भिडन्त : चेल्सी विरुद्ध म्यानचेस्टर युनाइटेड
कहाँ र कहिले हुदै छ चेल्सी विरुद्ध आर्सनल यूरोपा लिग फाइनल !!
ChelseaEden HazardUEFA Europa League